I-ES420-26P L2 Gigabit Simple Management Access Access switch
I-DCN ES420-26P iyiGigabit Managed Ethernet switch, enikezela ngamachweba angama-24 10/100 / 1000Mbps RJ45 kanye nama-2 SFP. Imbobo ngayinye isekela umsebenzi we-MDI / MDIX othomathikhi, futhi ingafinyelela ukudluliselwa kwejubane ngetambo. Iswishi ye-ES420-26P iyi-switch-gigabit Layer 2 yokuphathwa kwenethiwekhi eyenzelwe futhi yathuthukiswa ngokuzimela ukwakha amanethiwekhi we-gigabit asebenza kahle kakhulu. Inikeza ngohlelo oluphelele lokuvikela ezokuphepha, izinqubomgomo zeQoS eziphelele, nemisebenzi ecebile ye-VLAN. Kulula ukuphatha nokugcina, futhi ma ...
I-ES420-10P L2 Simple Management switch
I-DCN ES420-10P ihlinzeka ngo-8 * 10/100 / 1000M auto MDI / MDIX function kanye ne-2 * SFP port engabona ukudluliselwa kwejubane. Ingasekela i-ACL ngokususelwa ethekwini, ukufeza kalula ukuqapha kwenethiwekhi, ukulawula ithrafikhi, ukuphawula okuphambili nokuya phambili kwezimoto; ukusekela ubuchwepheshe be-STP / RSTP / MSTP L2 bokuvikela ukuxhumana, kuthuthukisa kakhulu ikhono lokudilizwa kwesixhumanisi, kuqinisekisa ukuzinza kwenethiwekhi; ukusekela i-ACL ngokususelwa ebangeni lesikhathi ukufeza ukulawula okunembile kokufinyelela kalula; ukusekela ukuqinisekiswa okungu-802.1x okususelwa ku-MAC naku-p ...
I-DIN-Rail L2 Shintsha Kwezimboni
I-IS2100D (R2) Series Industrial switch inikeza ukuxhumeka okusheshayo kweGigabit Ethernet ngendlela ye-compact form futhi yenzelwe izinhlelo eziningi zezimboni lapho kudingeka khona imikhiqizo enzima. Ipulatifomu yakhelwe ukumelana nezimo ezinzima ekukhiqizeni, amandla, ezokuthutha, ezokumbiwa phansi kanye nasemadolobheni ahlakaniphile. Ipulatifomu ye-IS2100D (R2) ibuye ilungele ukusetshenziswa kwamabhizinisi okwandisiwe ezindaweni ezingaphandle, ezinqolobaneni nasezikhungweni zokusabalalisa. Lokhu kushintshwa kusebenzisa isoftware ...
IS5600G-2U / IS5600XG-2U Shintsha Kwezimboni
I-IS5600G-2U / IS5600XG-2U ungqimba we-3 modular gigabit switch ethernet yezimboni isekela izivumelwano ezigcwele ze-Layer 2/3. Inikeza indlela yangaphakathi yokusetshenziswa kwendandatho engaba inketho ekahle yesendlalelo sokuhlanganiswa ngaphakathi kokuzenzekelayo kwemboni kanye nezinhlelo zokusebenza zokulawula inqubo. I-IS5600G-2U / IS5600XG-2U inikeza ama-modular slots ayi-8- port 1000Mbps Ethernet kanye ne-4 port eyodwa engu-1000Mbps / 10Gbps slot modular kuphaneli langaphambili. Imodyuli ye-combo Giga port inikeza iSFP interface ye-GE / 10G uplink noma ...
I-IS5600 Series L3 Industrial Swich
I-IS5600 uchungechunge lwe-modular gigabit switch ye-ethernet yezimboni isekela izivumelwano eziphelele ze-Layer 2/3. Inikeza indlela yangaphakathi yokusetshenziswa kwendandatho engaba inketho ekahle yesendlalelo sokuhlanganiswa ngaphakathi kokuzenzekelayo kwemboni kanye nezinhlelo zokusebenza zokulawula inqubo. Izici Nezinzuzo Izici Eziyinhloko ezingavimbeli isivinini esigcwele Isendlalelo se-3/3 phambili Izindlela zokuxhumana ezilinganiselwe ze-Multiple Ethernet Ikhono elingafuneki lokuhlinzeka ngokululama kwenethiwekhi. Kuhlanganiswe nesoftware yokuphathwa kwe-SNMP ukuhlinzeka nge-netw ephelele ...
Ukushintshwa kochungechunge lwethusi lwe-DCN CS6200-EI kungukushintsha kwesizukulwane se-10G okungaguquguquki okunikeza ukufinyelela okungaguquki kwe-gigabit namachweba we-10GE uplink. I-CS6200-EI switch yethusi ine-hardware ethuthukile kanye nokwakhiwa kwesoftware. Lokhu kushintshwa kunikezela ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza kalula ngezinto ezicebile ezifana ne-VSF (i-Virtual Switch Framework), i-IEEE 802.3at yokunikezwa kwamandla kagesi okungafuneki nokuningi. Ilungele ukuhlangana kwabantu abaningi noma ungqimba lomgogodla ...
CS6200 (R2) Dual Stack 10G Ethernet Routing Fibre Shintsha
Ukushintshwa kochungechunge lwentambo ye-DCN CS6200-EI kungukushintsha kwesizukulwane se-10GbE okungaguquguquki okunikeza ukufinyelela okungaguquki kwe-gigabit optical namachweba we-10GbE uplink. I-CS6200-EI switch ye-fiber ine-hardware ethuthukile kanye nokwakhiwa kwesoftware. Lokhu kushintshwa kunika ukutholakala okuphezulu, ukusabalalisa, ukuphepha, ukusebenza kahle kwamandla, nokusebenza kalula ngezinto ezicebile ezifana ne-VSF (Virtual switch Framework), amandla kagesi angasebenzi. Ilungele ukuhlanganiswa kwe-high-density optical in FTTx solutions noma ca ...